Fandehanana fifandraisana sy fiaraha-miasa afrikanina afrikanina amin'ny alàlan'ny Alliance sy fiaraha-miasa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fandehanana fifandraisana sy fiaraha-miasa afrikanina afrikanina amin'ny alàlan'ny Alliance sy fiaraha-miasa
Enga anie 17, 2019
The Birao fizahantany afrikanina miasa mafy ankehitriny amin'ny fananganana fiaraha-miasa ao amin'ny indostrian'ny fiaramanidina. "Ny fahitana an'i Afrika ho toeran-tokana iray dia tonga lafatra ho an'ireo zotram-piaramanidina maniry hiara-miasa aminay", hoy i Juergen Steinmetz, filohan'ny tetezamita ATB.
Rehefa niresaka tamin'ny eTN Andriamatoa Vijay Poonoosamy dia nilaza ny maha-zava-dehibe ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana ho an'ny kaontinanta afrikanina ary nilaza hoe: "Tena mahavariana ahy ny zavatra Birao fizahantany afrikanina nahatratra tao anatin'ity fotoana fohy ity! Faly aho manohana azy io. ” Andriamatoa Vijay Poonoosamy dia teratany Maurice izay miasa ankehitriny amin'ny talen'ny Singapore QI Group, ary VP taloha ho an'ny Etihad Airways.
Tamin'ny Fivoriamben'ny Stakeholder Stakeholder Aviation Association of the Airline Association (AFRAA) faha-8 vao vita, hoy i Vijay Poonoosamy, rehefa nampandeha ny fivoriana tany Maurice izy:
Afrika manana mponina 1.3 miliara na 16.6% amin'ny mponina eran-tany dia ambany noho ny 4% amin'ireo mpandeha fitaterana an'habakabaka eran-tany.
Ny fitaterana an'habakabaka afrikanina dia noho izany dia manohana asa 6.9 tapitrisa sy $ 80 miliara fotsiny amin'ny hetsika ara-toekarena fa ny fitaterana an'habakabaka manerantany kosa dia manohana asa 65.5 tapitrisa sy $ 2.7 trillion amin'ny asa toekarena.
Ny sakana marobe amin'ny fitomboan'ny fitaterana an'habakabaka afrikanina dia ahitana fotodrafitrasa malemy, fari-piainana ambany, vidin'ny tapakila ratsy, tsy fahampian'ny fifandraisana, vidiny ambony, tsy fahaiza-mifaninana, fameperana visa ho an'ny Afrikana sy tsy Afrikana ary ny tsy fahampian'ny fahalalan'ny firenena ny mpampitombo marobe. vokatry ny fitaterana an'habakabaka.
Tao amin'ny AFRAA AGA tamin'ny volana novambra lasa teo, IATA DG & CEO, Alexandre de Juniac, dia nanambara fa:
“Ny tombam-bidy eran-tany isaky ny mpandeha dia 7.80 $. Saingy ny sidina an'habakabaka any Afrika, eo ho eo, dia mamoy $ 1.55 isaky ny mpandeha entina. ”
Nasongadiny koa fa:
“Ny vidim-piainana ao afrika dia somary avo ihany saingy i Afrika amin'ny saran-dàlana eran'izao tontolo izao dia ambany dia ambany, raha oharina amin'ny tsena hafa mitovy amin'ny halavan'ny sehatra mitovy amin'izany. Ny olana dia tsy ny saran-dàlana be dia be araka ny fenitra iraisampirenena, fa ny fari-piainana ambany dia ambany noho ny salan'isa, ka ny fividianana tapakila fiverenana mahazatra avy any Afrika dia mitentina 7 herinandro amin'ny fidiram-pirenena isam-batan'olona. Latsaky ny 1 herinandro ny vola miditra amin'ny firenena isam-batan'olona any Eropa na Amerika Avaratra. ”
Ankoatr'izay, ny Afrikana dia mitaky visa amin'ny salanisa 55% amin'ireo firenena eto amin'ny kaontinanta misy antsika ary 14 amin'ireo firenena afrikanina 54 ihany no manolotra visa rehefa tonga any amin'ireo teratany afrikanina.
Na eo aza izany dia eo am-piandohan'ny fanavaozana i Afrika fa raha ho tafiditra ao anatin'ity fanavaozana ity na tsia ny Afrika Air Transport dia miankina amin'ny kaompaniam-pitanterana afrikanina sy ireo mpiara-miasa aminy.
Amin'ny 2050, ny mponina ao Afrika dia antenaina ho 2.5 miliara na 26.6% amin'ny mponina eran'izao tontolo izao.
Raha ny filazan'ny IATA, ny isan'ny mpandeha an'i Afrika dia ho avo roa heny amin'ny 2035 ary ho avo telo heny ao anatin'ny 20 taona manaraka miaraka amin'ny fitomboana 5.4% isan-taona raha toa ka latsaky ny 5% isan-taona ny salanisa manerantany mandritra ireo vanim-potoana ireo.
Raha toa ka hitrandrahan'ireo kaompaniam-piaramanidina tsy afrikana ny ankamaroan'ireny fotoana iraisam-pirenena goavambe ireny ary raha tsy tratran'ny ankamaroan'ny tombontsoa afrikanina afrikanina lehibe izany dia miankina amin'ny fahavononan'ny kaompaniam-pitanterana afrikanina hiasa sy handresy miaraka amin'ny fanampian'ny Mpandray anjara.
Mba hanampiana anay hizaha ny fomba hanatsarana ny fifandraisana intra-Afrika sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny African Airlines izay faly ananantsika amin'ny maha-panelista anay
Aaron Munetsi, talen'ny raharaham-panjakana momba ny lalàna sy ny indostria - AFRAA
Dominique Dumas, filoha lefitra Sales EMEA-ATR
Andriamatoa Jean-Paul Boutibou, ny filoha lefitra Sales, Moyen Orient, Afrika ary ny Ranomasimbe Indianina - Bombardier
Andriamatoa Hussein Dabbas, Mpitantana Jeneralin'ny Tetikasa Afovoany Atsinanana & Afrika - Embraer
Tontonana iray izay maneho ny fanambin'ny zotra afrikanina miaraka amin'ny fandanjana ny miralenta!
Ny fiaraha-miasa win-win eo amin'ny African Airlines dia hamela fihenam-bidy lehibe amin'ny alàlan'ny famongorana ireo fandaniam-bola be dia be sy ny fampiasana ny ambaratonga ara-toekarena ary hanampy amin'ny famindrana vola amin'ny alàlan'ny synergie stratejika.
Ireo faritra voakasik'izany dia tsy misy farany ary ao anatin'izany ny fividianana, ny solika jet, ny fitantanana ny fiaramanidina, ny kojakoja sy ny fikojakojana, ny motera, ny IT, ny fikarakarana sakafo, ny fiofanana, ny IFE, ny seunges, ny programa tsy fivadihana, ny fanolorana tany ary ny fitantanam-bolan'ny Treasury.
Ny fikatsoan'i Afrika dia mifandraika amin'ny fanesorana ireo fitaterana an'habakabaka afrikanina, ao anatin'izany ny Africa Airlines sy ny fifandraisana intra-afrika, izay mifandraika amin'ny fahavononan'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka afrikanina sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy mba hiara-miasa sy hanao kalibraly. vahaolana mandresy amin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka matotra na fifaninanana fiaraha-miasa alohan'ny fotoana rehetra.